ကျွန်တော်တို့သည် နေ့စဉ် နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်နေကြသည် ။ မိမိ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သလို အခြားသူများ၏ အကူအညီ ဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အခြားသော သူများကိုလည်း ကူညီပေးနေကြသည်။ ထိုသူများတွင် ကျွန်တော်တို့ သိကျွမ်းသူများပါဝင်သလို လုံးဝ မသိကျွမ်းသူများလည်းပါဝင်ကြသည်။
ကူညီမှုကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မျှော်လင့်ချက် (ရယူလိုမှု) ဆိုသောအရောင်လေး စွန်းထင်း
နေနိုင်သလို သန့်စင်သော မေတ္တာတရားနှင့် ကူညီမှုလည်း ရှိနိုင်ပါသည် ။ ကူညီသင့်၍ ကူညီရသလို မိမိဆန္ဒအလျှောက် အကူအညီ ပေးလိုက်သည်လည်း ရှိ၏ ။ မိမိ ကူညီလိုက်မှုတွင် သန့်စင်သော မေတ္တာတရား ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါသလဲ……… ။
ဥပမာ .. ကျွန်တော်တို့ ရှေ့တွင် စက်ဘီးလဲနေသူ တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်ကူညီမည်လား ။
ထိုသူသည် သူစက်ဘီး မလဲခင် ကျွန်တော်တို့ကို ပြဿနာရှာသူ ဖြစ်ခဲ့ပါက ကူညီမည်လား ။
နောက်တစ်ခုက ..ကျွန်တော်တို့သည် သူတစ်ပါးကို အကူအညီ ပေးကြရာတွင် ၀တ်ကျေတန်းကျေ
ကူညီပေးသည်လား။ သူနှင့် ထိုက်တန်သလောက်ဟု ကိုယ့်စိတ်နဲ့ သတ်မှတ်၍ ကူညီသည်လား။
သို့မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ခွန်အား ရှိသလောက် ကူညီသည်လား။
ကျွန်တော်သည် လူတစ်ယောက်ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးဖူးပါသည်။ သူသည် လူတစ်ယောက်ကို အားလပ်၍ အချိန် တော်တော်များများ ကူညီခဲ့သည်။ အကြိမ်များများ ကူညီခဲ့သည်။
သူကူညီလိုက်သူထံမှ ပြန်လည် ကူညီမှုကို မျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။ တုန့်ပြန်မှုကို မရရှိခဲ့သော် ဘယ်လို ယူဆပါသလဲ ဟု မေးခဲ့ဖူးသည်။ သူ ၏ အဖြေကတော့ ပြန်လည် ကူညီမှုမရလျှင် သူ ရှုံးသည် တဲ့လေ။
( ကျွန်တော်တို့ ၏ ပြင်သင့်သော စိတ်ဓါတ်များ )
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြားဖူးသည် ။ သူ့အလှည့်တုန်းက လိုက်လုပ်ပေးရတယ် ..
ကျွန်တော် အလှည့်တော့ လိုက် လုပ်မပေးဘူး တဲ့ .. အဲဒီ အသံများ ကြားရချိန်တွင် စိတ်မကောင်းပါ ။
ကိုယ် ကူညီပေးချိန်တွင် ကိုယ်တိုင် အားလပ်၍ လိုလိုလားလား ကူညီပေးခဲ့သည် မဟုတ်ပါသလား ။
သြူပန်လည် အကူအညီတောင်းချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ ဖျားနာနေပါက ကူညီနိုင်မည်လား။
အဘယ်ကြောင့် တစ်ဘက်လူ၏ အဆင်မပြေမှုကို ထည့်မစဉ်းစားပါသလ။ဲ
သူ တစ်ကယ်ပဲ မအားတာလား .သူ့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြောင့်လား ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကိုို မဝေခွဲပဲ ဘာကြောင့်များ ကိုယ့် ကူညီပေးလိုက်မှုကို အရောင်စွန်းထင်းစေတာလဲ ဟု မေးစရာ ရှိလာပါသည်။.
နောက်တစ်ခုက … ကျွန်တော်တို့သည် အကူအညီတွေကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာပေးဖူးကြပါလိမ့်မည်။
ထိုအကူအညီ အပေါ် ပြစ်တင် ဝေဖန်မှုများကို ကြားရသည့်အခါ စိတ်ထဲတွင် နာကျင်စွာ ခံစားဖူးကြပါသည်။
ကျွန်တော့်ကို ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးသည်။ သူ့ကို လူတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလျှင်
သူလုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များကို မလုပ်ပဲ အကူအညီတောင်းသည့် ကိစ္စကို သူကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်သည်။ သူ့ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးသည် တဲ့ ။
သူ့စိတ်တိုင်းကျ အပင်ပန်းခံ လုပ်ဆောင်ထားခဲ့သော အရာသည် အကူအညီ တောင်းသူ၏ စိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုကို တော့ ပေးစွမ်းနိုင်သည် တဲ့။ လုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်က သူတောင် မကျေနပ်မှု (စိတ်တိုင်းမကျမှု) ရှိခဲ့လျှင် အကူအညီ တောင်းသူ ရင်ထဲတွင်ရော………. …………..
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကို တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီမည်။ ပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်မထားပဲ ကျွန်တော့်စိတ်တိုင်းကျပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့် လူပေါင်းများစွာ၏ လိုအပ်ချက်များကိုတော့ မကူညီနိုင်သေးပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော် မကူညီလိုက်နိုင်သူက ကျွန်တော့်ကို အမျိုးမျိုး ပြောဆိုပါကလဲ ကျွန်တော် တုန်လှုပ်မည် မဟုတ်ပါ ။
ကျွန်တော်သည် မည်သူ့ထံမှ အကူအညီကို မျှော်လင့်မထားပါ ။သို့သော် မေတ္တာတရား သည် ရောင်ပြန်ဟပ်လျှက် ရှိပါသည် ။ မေတ္တာရဲ့သဘောကိုက အလျားအနံမရှိပေမယ့် အသွားအပြန် ရှိသည် မဟုတ်ပါလား …………..
သင်တို့ရော မေတ္တာတရား ကို ဘယ်လို နားလည် လက်ခံ ထားကြပါသလဲ………..………
: ကျွန်တော့် ခံစားမှု
Posted by အိမ်ဝေးသူ at Thursday, December 20, 2007
On 21 December 2007 at 09:13 su wai said...
ကိုငြိမ်းချမ်းက တော်တော် တွေးနိုင်တာပဲနော်...အတွေးရပ်ဝန်းကသူတောင် အရှုံးပေးရတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးမှပဲ လူတွေကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကူညီခဲ့ပါလိမ့်လို့ ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ ဆုဝေက ဆိုင်မှာလုပ်တာဆိုတော့ customer တွေ အဆင်ပြေအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးပါတယ်။ သူတို့တွေ အဆင်ပြေနေရင် ကိုယ်လဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒီလို ကူညီပေးလိုက်လို့ သူတို့ဆီက ဘာမှ ပြန်မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူများကို စေတနာ မေတ္တာနဲ့ ကူညီပေးရင် ကိုယ့်အလှည့်မှာလဲ ကူညီမယ့်သူ မရှားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုငြိမ်းချမ်းပြောတဲ့ အသွားအပြန်ရှိတဲ့ မေတ္တာရဲ့သဘောကို ယုံကြည်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။
On 21 December 2007 at 09:35 သဇင်ဏီ said...
ကိုယ်အကူအညီပေးလိုက်လို့ အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးမှ ကိုယ့်ကိုမခန့်လေးစားလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ပြီးတည်းက ကူညီဖို့ကို နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ.. ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတော့ အသိတရားပြန်ရသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ
On 23 December 2007 at 07:23 Layma said...
တခါတလေကျတော့ နေရာတကာ အခိုင်းခံနေရတာ ( လှအောင်ပြောရင် အကူအညီတောင်းတာ) ကို အားနာပါးနာနဲ့ ကူညီနေရရင် စိတ်ဆင်းရဲတယ်...။
နှုတ်မဆက်ရက်ပေမဲ့ ချန်ထားခဲ့ရပြီ ၂၀၀၇ …..ကမ်းလင့်ကြ...
မင်းခိုက်စိုးစံရဲ့ ကလေးအတွေးများ ( ၂ )
လင်းမာန်သီ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်
လှ၍ ခံစားမှုမဲ့သော စာလုံးများနှင့် ဖွဲစည်းထားသောစာ ...
ဂျူး ၏ နှစ်ကိုယ်ခွဲ
မင်းခိုက်စိုးစံရဲ့ ကလေးအတွေးများ ( ၁ )